ကြေးမုံဂျီး မဟုတ်တရုတ် ရွာပြင်ထုတ် Go | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကြေးမုံဂျီး မဟုတ်တရုတ် ရွာပြင်ထုတ် Go
ကြေးမုံဂျီး မဟုတ်တရုတ် ရွာပြင်ထုတ် Go
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Nov 7, 2013 in Aha! Jokes, Satire | 12 comments
‘မဟုတ်တရုတ် ကြေးမုံဂျီးကို ဆန့်ကျင်ဂျ’ ဤဂါး ကမ္ဘာတလွှား သဲသဲလှုပ် အောင်မြင်ကျော်ကြား လျက်ရှိသော မြန်တျန့်ဂေဇက် သဒင်းစာ တည်ရှိရာ တဏှာဂေဇက်ရွာထိပ်မှ နံနက်စောစောစီးစီး လွင့်ပျံလာသံဖြစ်သည်….။ အော်ဟစ်ဆူပူနေသူမှာ သာမီးလေးများအား နေပူမိုးရွာမရှောင် လျှာကျွေးနေသည့် ဦးကြောင်ကြီး။ အရက်မူး သောင်းဂျန်းသည် ဆိုရအောင်လဲ အရက်ပျံ အနံ့ပင် မခံနိုင်ဂျောင်း လူဒိုင်းသိကြသည်။ ရပ်ထဲရွာထဲ အခြင်းချင်း စကားများ ရန်ဖြစ်လေသလား..။ ဒါလည်း မဖြစ်နိုင်၊ ကြေးမုံဂျီးတွင် ထိုကဲ့သို့ သတ္တိဗျတ္တိမရှိ၊ အိမ်ပေါက်စေ့ ရွာလည်လျောက် ကြောင်ကြီးအတင်းလှည့် ပြောတတ်သည်မှလွဲ အခြားအပို မလုပ်ရဲ။ ရွာထိပ်သင်ပုန်းဝယ် အကြိမ်ဖန်များစွာ နာမည်တပ် စိန်ခေါ်သည်ကိုတောင် ပြန်တုံ့ပြန်ရန်ဝေးစွ၊ ဘာရေးထားသည်ကိုပင် ကိုယ်တိုင် သွားမဖတ်ရဲ၊ တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ အားကိုးနှင့် ထောင်ထောင်ထောင်ထောင် လုပ်ရဲသူသာဖြစ်သည်။
ကြောင်ကြီးဂါး ပိုမိုရဲတင်းလာဂျေပီ။ ကြေးမုံဂျီးကား ထုံးစံအတိုင်း တုပ်တုပ်မျှ မလှုပ်ဝံ့၊ တအိမ်လုံး မီးအမှောင်ချ ပြတင်းတံခါး အကုန်ပိတ်၍ ကုတင်အောက်ဝင်နေသည်။ စပ်စုသူများ အိမ်တံခါးခေါက် သတင်းမေးသည့်အခါ အတွင်းမှ ‘လူဂျီးတွေ အရှိဗူး၊ အလှူခံဆို ကန်တော့ပါသေးရဲ့’ မနှဲလေးသံဖြင့် ဖြေလေသည်။ နွေလည်ခေါင် ပစ်ချသည့်မိုးကြိုးဂို တရုတ်လုပ်ထီးနှင့် ကာနေရှာသော တရုတ်ကူမြူနစ်ကေဒါ ကြေးမုံဂျီးဗေတီး၊ သနားစဖွယ် အလျဉ်းမရှိချေ။။ (မှတ်ပလားကွ တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီး..)
သို့သော်လည်း သူတော်ခြင်း သတင်းလွေ့လွေ့ ဆိုသည့်အတိုင်း ၎င်းဖက်မှ ပစ်ကူပေးမည့် ရွာသူားအချို့ ရောက်လာကြသည်ဝယ် အပ်နှင့်ထွင်းရမည့်အမှု ဒုံးပျံနှင့်ပစ်ရသည့်အထိ ကြီးကျယ်သွားလေတော့သည်။ ‘အဲလိုတော့ မပြောသင့်ဘူးအေ့၊ ဒါ လူမျိုးရေး ခွဲခြားတာ.. မြန်မာပြည်မှာမွေး မြန်မာပြည်မှာစား အတူတူပေါ့’ ‘ဟုတ်တယ်အေ၊ တချိန်က အမှားတွေ ပြန်မလုပ်သင့်တော့ဗူး။ ရွာတွင် ဘာကိစ္စရှိရှိ စွာစွာစွာစွာ လုပ်နေသည့် အပိုဂျီးအဖွဲ့မှ ကန့်ကွက်သံဖြစ်သည်။ သင်္ဘောသီးဝယ် ပြန်လာသော မစ္စတာဖောကလည်း ရတုံးရခိုက် ‘ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရပြီ၊ မဟာဗမာ လူမျိုးဂျီးဝါဒ သွပ်သွင်းနေသလော၊ စဉ်းစားဂျစေလိုပါဒယ်’ ဝင်ထောင်၏။ ထိုအခါ နားမလည် ပါးမလည် သူများပြောတိုင်း ယုန်ဒက်သော ခယစ်စတယ်လှိုင်းနှင့် နော်ရွှီး ပက်ကညောမလေးနှစ်ဦး တာလဘောဟင်းချက်နေရာမှ ရုတ်ခြည်း ထလာပြီးလျင် ‘ဟေး မကောင်းတိကောင်း တိကောင်းလားဟေ့…’ ဆိုဂါ ကေအန်ယူ အလံလွင့်လျက် ကရင်ဒုံးယိမ်း ထကလေသည်။
ဤသို့ ရှုပ်ရှပ်ခက်နေသည်ကို တာလီဘန် ဆလိုင်းဖင်ပြောင်၊ အေ့ဝဒီဂျီးတို့က အခွင့်ကောင်းယူဂါ အသေခံ ဗုံးခွဲမည်ပြုစဉ် ပက်ကညောယိမ်းနှင့်အပြိုင် ထပ်တရာလိမ်မယ် အကဆိုဂါ လူအုပ်တွင်းဝင်၍ လူပြိုလူအိုမရှောင် ဝင်နှိုက်၊ညှစ်၊လိမ်ဆွဲသော ဖြိုးခြစ်သူ ဦးဆောင်သည့် လိင်တူချသူများကြောင့် အကြမ်းဖက်သမားများအား ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများနှင့် လက်ပူးလက်ကြပ် ဖမ်းဆီးရမိတော့သည်။ သဂျီးဥခိုမ်ကလည်း လူ့အခွင့်အရေး ပဋိညဉ်ကြေငြာစာတမ်း ဖတ်ကည လူခြင်းအတူတူ ခွဲခြားဆက်ဆံခွင့် မရှိကြောင်း ခါတော်မှီ ဆေးဝင်သုတ်၏။ စင်ကာပူရ ဇွိမမက ရွာသင်ပုန်းဝယ် ပီကင်းဘဲကင်လုပ်နည်း ကပ်ခါ မသိမသာ ကြေးမုံးဂျီးအား ထောက်ခံသည်။
ကြောင်ကြီးဖက်ဝယ် ဘယ်သူမှ မရှိတော့ပြီမို့… အရူးကွက်နင်းကာ သိုင်းကွက်ပြောင်းရတော့သည်။ ‘အဟမ်း.. ဂလိုရှိပါတယ်.. .. ကိုကိုဒို့ မမဒို့ အထင်လွဲကုန်ဂျပီ၊ အနော့်ဆိုလိုရင်းက ကြေးမုံဂျီး တရုတ်မဟုတ်ဘူးထင်လို့ ဆန့်ကျင်ဂျလို့ ပြောချင်ဒါပါ။ အထက်အညှာ တောင်တွင်းကြီးမှာဆို ပျုအဆက်အနွယ်တွေ အများကြီးရှိပါဒယ်။ သူတို့ရုပ်တွေကြည့်ရင် တရုတ်အတိုင်းပါပဲ။ ပြီးတော့ မနုဿပြင်ညာရှင်များကိုယ်တိုင် ဗမာဆိုဒါ တိဗက်ကနေ ဆင်းသက်လာတာလို့ လက်ခံကြတယ်။ ဒဂယ်ဒေါ့လည်း လူသားအစ တရုတ်ကပါ။ အဲဒီကနေ မုန့်ကုလားမဲ ကြိုက်သူက အာဖရိကန် လူမည်းဖြစ်၊ မုန့်ပေါင်းကြိုက်သူက လူဖြူဖြစ်၊ ထန်းသီးမုန့်ကြိုက်သူက လူဝါဖြစ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးချက်ကြိုက်သူက ရက်အင်ဒီးယန်း ဖြစ်ကုန်တာနေမှာ..။ အားလုံးဆန္ဒနဲ့အနော် တထပ်ထဲပါပဲဗျာ..။ ကဲကဲ ကြေးမုံဂျီးလည်း အိမ်ထဲပိတ် ငိုမနေနဲ့ဒေါ့၊ ထွက်ထွက်.. နေတောင် အတော်လင့်ပြီ၊ ဦးကြောင်ကြီးနဲ့ ဘုရားသွား ကျောင်းတက် အတူလုပ်ရအောင်………………။
စစ်သမီးကြေးမုံဂျီး ခြစ်မငြီးဆေးကုန်တီး ခွစ်အဟီးမေးတုန်သီး ဟစ်ပြီးဗေးပုံတီး..
အခြေမဟန်တော့ ကြောင်ကြီးဘဝ ဆိတ်ဟိုဒင်းဖြစ်ပြီမဟုတ်လားးးး
နောက်ခါ ပီကင်းဘဲမက ဘီယာ မိုးဆက် ကို ကင်ပြီးကို ဆန်ဒ ထုတ်ဖော်မယ်မှတ်!
အ ဟီးးး ဟီးးး ဟီးးး ဟီးးး ။
ကျန်တာတွေတော့ ၊ ပြောချင်ဘူးရယ် ။
ဓါတ်ပုံထဲက သာမီးလေးတွေက ဖြူတင်း ပြည့်မြင့် ချောနေတာဘဲ ။
ပြောရရင် မိုးစက်ဝိုင် ထက်တောင် လှသေး ။
ဟီးးး ဟီးးး ။ ဒါမျိုး တပ် တစ်တပ် နှင့်သာ ။ ဟီးးး ဟီးးး ။
ဟီ ဟိ ကျောက်စ်သာ ဘီလျံနာ ဖြစ်လို့ကတော့…
ခရီးသည်တင် သင်္ဘောပေါ်မှာ အနီတပ်၊ အမဲတပ်…
ကိုယ့်အဘကို အဲသည့်သင်္ဘော သဂျီးလုပ်ခိုင်းမယ်… အား ဟိ
ကြောင်လဲ တရုပ်မဂို… အဲလေ.. တရုတ်ကို မလှန်ရဲဘူးမဟုတ်လား
စီလုပ် စစ်သမီးတက္ကသိုလ်မှာ ကာယနည်းပြဖြစ်ပယဇီညှော်.
လူထုအူးကြောင်ရေ… ခရီးထွက်တုန်းက ကျွဲတစ်အုပ် လိုက်မောင်းခဲ့တယ်လို့
အဘဘုတ်ကို လာပြောသေးသလားလို့… ခုမှ ဘာလို့ တရုတ်သာမီးလေး
တပ်ရင်းတစ်ရင်း လာပြတာလဲကွဲ့။ ။ အဘဘုတ်လည်း အိုကြီးအိုမနဲ့ကျမှ
ဗမာကွလို့ ဇာတိသွေးလည်း နည်းနေပါပြီကွယ်။ ဘယ်ကဆင်းတက်လာလာ
အဘဘုတ်တော့ ဖွဲတစ်ဆုပ်နိုင်သေးတော့ အဲ့ တီလုပ်မလေး တပ်ရင်းတစ်ရင်းနဲ့
လှံစွပ်တက်ပြီး ဗမာဘက်က တိုက်ပွဲဝင်ပါရစေတော့ကွယ်။
အဲလို ရဲရဲတောက် တပ်နဲ့သာဆို…
ရွှေမိုးတိမ် ရဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာစားစရာ Post မှာ ထန်းသီးမုန့်က အဖြူ ပါ။
ဒါ့ပုံ တွေ သက်သေရှိတယ်။
အစား Post မို့ အသေအချာမှတ်ထားတာ။
ထန်းသီးမုန့် အဝါမို့ လူဝါတွေကြိုက်တယ် ဆိုပြီး လာ မရွှီး နဲ့ ဟေ့။
ငတုံး တွေ မဟုတ်ဘူး။ မှတ်ထား။
ကျနော်လည်း နည်းနည်းလေး ကြုံတုန်း ဝင်ပြောပါရစေ ခင်ဗျာ။ ထန်းသီးမုန့်က အဝါလည်း ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။ အခု မြို့မှာ ရောင်းနေတဲ့ ထန်းသီးမုန့်တွေက ဆေးဆိုးတာ များလို့ ဝါထိန်နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် တကယ် ဆေးမဆိုးပဲ လုပ်ထားတဲ့ ထန်းသီးမုန့်လည်း ထန်းသီးမှည့်နဲ့ လုပ်ရင် အဝါရောင်လေး သန်းနေပါတယ်။ ဓတ်ပုံထဲမှာ ဖြူတာက ထန်းသီးနုနဲ့ လုပ်ထားလို့ ဖြစ်မှာပါ။ ဖော်မြူလာ ကွာသွားလို့ပါ။
ခေါပြင်လည်း ဓတ်ပုံထဲမှာက အပေါ်ယံ အနက်ရောင် ဖြစ်နေပေမယ့် အဖြူရောင်ခေါပြင်လည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပဲ တောင်ငူမုန့်ဟင်းခါးက ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ အရောင်ရော အရသာရော လုံးလုံး မတူပါဘူး။